Food Safety - Somali
Raac afartaan talaabo si cuntada qoyskaagu ay u noqoto mid aan cudur keenin.
Dhaq gacmahaaga ka hor intaadan cuntada karin ama cunin. Dhaq gacmahaaga ka dib markaad taabato cunto ceeriin ah, musqusha isticmaasho, bedesho dhaybar ama aad taabato xoolo rabaayad ah.
Isticmaal weel nadiif ah. Meelaha cuntada la saaro ku dhaq biyo kulul oo saabuun leh wixii meel ku qubtana/daatana isla markiiba ka tirtir.
Iskumeel ha Dhigin:
Hilibka, hilibka digaagga, iyo cuntada badda ka timaada ee ceeriin meel ha la dhigin cunto aan la karin doonin.
Cunto ceeriin ahi yeysan ku dhacaamin cuntada bisil ee ku jirta firinjiteerka.
Si fiican u kari hilbaha, hilbaha digaagga, cuntada badda ka timaada iyo ukunta. Fiiri heerkulka uu yahay helibka gudihiisu adigoo isticmaalaya kulbeegaha cuntada. Heerkulada laga rabo in ay ahaadaan waa: Hilibka lo’da oo shiidan 160°; Hilibka doofaarka 160°; Hilibka digaagga 165°.
Cuntada qabowga firintijeerka/talaajaddala barafoowday intaadan karin ka hor firinjiteerka gudihiisa qeybta sida caadiga ah wax u qaboojisa ama maykrowafe ku dhalaali.
Cuntada geli firinjiterka qaybtiisa sida caadiga ah wax u qaboojisa ama qaybtiisa cuntada lagu barafeeyo/fariisiyo 2 saac gudahood markii la diyaariyay. Marka cimiladu kulushahay oo heerkulku ka sareeyo 90° F, cuntada geli firinjiteerka qaybtiisa caadiga ah ama qaybtiisa cuntada lagu fariisiyo 1 saac gudaheed.
Firinjiteerka qaybtiisa caadiga wax u qaboojisa ha ahaato 40° F ama ka hoos qaybtiisa wax lagu barafeeyo 0° F ama ka hoos.
Cuntada qaarkeed taxadar dheeraad ah samee:
Waxay u badantahay in cuntada qaarkeed ay leedahay bakteeriya cudur keeni karta. Dumarka uurka leh, sebiyada iyo caruurta yaryar halista kaga iman karta cudurada cuntadu keento waa saraysaa. Raac talaabooyinkan si cuntada qoyskaagu ay u noqoto mid aan cudur keenin:
Si fiican u kari hilibka, kaluunka, hilibka digaagga, ukunta iyo tofu-ga. Cuntadan ha siin dadka iyadoo ceeriin ah ama aan si fiican loo karin.
Kululee hot dog-yada, hilbaha qabow oo bacaysan (luncheon meats), hilbaha la raqday ama la shiiday oo bacaysan (bologna) ama hilbaha bacaysan oo diyaarka u ah in la cuno (deli meats) illaa ay kulayl la qaacaan. Si aan loogu guban, xoogaa u qabooji caruurta intaadan siin.
Caano kululeeyn looga dilayo jeemi cudur keeni kara lagu sameeyey (pasteurized) oo kali ah cab. Ka fogow caano sidii loo soo lisay ah. (Pasteurized macnaheedu waa intaan la bacayn ka hor cuntadaas waxaa la gaarsiiyay heer kululeyn ah oo dila bakteeriyada).
Cun jiis laga sameeyay caano pasteurized ah oo kali ah. Hubi in ay ku qorantahay waxaa laga sameeyay caano pasteurized ah.
Cab casiir (juice) pasteurized ah oo kali ah.
Ka fogow hilib la raqday (pâté) oo firinjiteer ku jira ama hilbaha la raqday oo sidii malmalaadada wax loo marsado lagana soo qaaday meesha hilibka la saarsaaro. Ka fogow kaluunka qaaca ama qoraxda lagu qalajiyay (smoked fish) ama cuntada badda illaa la kariyo.
Ka fogow curdinta ka baxda dhirta ama miraha oo aan la karin (sprouts).
Hal bakteeriya oo laga helo cuntada aan nadiifka ahayn waa Listeria, waxaa laga heli karaa cuntada mar hore la kariyay oo firinjiteerka la geliyay sida cuntada diyaarka ah ee dukaanada laga gato, hilbaha qabow ee bacaysan, hot dog-yada, ansalaatada ama khudradda diyaarka ah iyo hilbo kale oo mar hore la kariyay ama hilbaha digaagga. Listeria waa ku kori ama ku tarmi kartaa heelkulka firinjiteerka. Waxaa loo baahanyahay kululeyn si loo dilo Listeria. Cudurada laga qaado cuntada oo Listeria ay keento waxaa la yiraahdaa listeriosis. Dumarka uurka lihi waxay listeriosis qaadi karaan in 20 laab ka badan dadka kale ee waaweyn ee caafimaadka qaba. Listeriosis waxay sababi kartaa dhicis (ilmo aan sidkiisii dhamaysan), qubsiinyo (uurkujirka oo soo dhicisa) ama cudur xun iyo xitaa inuu dhinto ilmaha dhashaa.